19 April, 2013 21:37 « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Uncategorized » 19 April, 2013 21:37
19 April, 2013 21:37
ကမ္ဘာ့ဒုတိယအချမ်းသာဆုံး အမေရိကန်သူဌေးကြီးWarren Buffett ရဲ့
မှတ်သားဖွယ်ရာ အဆိုအမိန့်လေးတွေပါ… သူပြောတာတွေကတော့….
… သုံးစွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး“ ခင်ဗျားတစ်ကယ်အသုံးမ၀င်တဲ့အရာတွေဝယ်ရင်
တစ်နေ့ကျရင် အသုံးဝင်တဲ့အရာတွေ ထုတ်ရောင်းရလ်ိမ့်မယ်”
စုဆောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး“ သုံးလို့ပိုတဲ့ဟာကိုမစုနဲ့၊ စုလို့ပိုတဲ့ဟာကိုသုံး”
စွန့်စားကြည့်တဲ့အခါ “ရေအတိမ်အနက်ကို သိချင်ရင် ဘယ်တော့မှ
ရင်းနှီးမြှပ်နှံတဲ့အခါ “ခြင်းတစ်ခြင်းထဲမှာပဲ ကြည်ဥတွေအကုန်လုံးမထည့်နဲ့”
မျှော်လင့်ချက်ထားတဲ့အခါ “ရိုးသားမှုဆိုတာ တန်ဖိုးအရမ်းကြီးတဲ့
လက်ဆောင်ဖြစ်လို့ တန်ဖိုးမရှိတဲ့လူတွေဆီက မမျှော်လင့်နဲ့”
Post By; MoekyashwecoSee More
Like · · Share · 61923404 ·2hours ago ·
Read ABC News’ full coverage of the Boston Marathon Bombers Manhunt
This photo released by the FBI early Friday… View Full Size
Marathon Bombing Suspects’ Uncle: ‘We Are Ashamed’ Watch Video
Boston Bombing Suspects ‘There to Fight’ Watch Video
Bombing Suspects’ Possible Foreign Connections Watch Video
"That war initially began asanationalist war, much like the first one, but very, very quickly metastasized into something that looks much more like the radical Salafi-Jihadi movements we’ve seen in other regions around the world," Swift said.
"The movement that’s emerged from the 15 years of war is very radical, it’s very virulent, it’s very nasty, but up until now, it’s also been very, very local. Their ideology and rhetoric talks about fighting jihad against the West, but their operations have always been in Russia itself and predominately within the republics of Chechnya, Dagestan, and Ingushetia," he said.
"So the bombing in Boston at the Boston Marathon, doesn’t really seem to comport with the operations we’ve seen from of this region in the past, but it does comport with the self-radicalizing ideology," he said.
← ဦးနာအောက်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၁၁၉၄-၁၂၇၅)	ရခိုင် တိုင်းရင်း သား များကို ထောက်ခံ ခြ င်းသည် အမျိုး ဘာသာ သာသနာ မြန်မာပြည် မြန်မြာ ပည်သား များကို ကာကွယ် နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ →